Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II) | I-Androidsis
el_uliulius | | Reviews, Samsung
Emva kwe icandelo lokuqala Ukunikezelwa kwimo yesiqhelo yesiphelo, siza kuthetha kule yesibini malunga icandelo lesoftware. Yonke i iprogram kunye Ukusebenzisana ukuba esi sixhobo sisinika, kunye nethuba lokuthwala, kunjalo, i-Android.
Siqala ngokuthetha malunga inguqulelo yenkqubo yokusebenza into ayizisayo. Ibandakanya Android 2.2.2, Kwiinguqulelo zamvanje zeFroyo, nge ikernel 2.6.32.9. De Uhlaziyo lweGingerbread akukho nto ithethweyo ngeSamsung. Ngokubeka iGinger ngokwakho, andifumananga kwanto. Ngelishwa, ayisosixhobo sithandwa kakhulu kwaye kubonakala ngathi akukho phuhliso lwayo. Ungasisusa isixhobo ngaphandle kwento enye. Ndiqinisekile ukuba ukuzisa uhlobo lweCyanogenMod ukusuka kwi-Galaxy S (ifowuni) ukuya kwi-East Galaxy S (MP4) ngekhe kube nzima, kodwa akukho mntu usebenza kuyo.
Ewe indawo yemizobo yiyo I-touchwiz ye-Samsung ezisa i-Galaxy S kwaye Isebenza kakuhle kakhulu. Oopopayi aboneleyo kunye nokwenzeka kokongeza ezinye iiwijethi. Ibe indibaniselwano kunye neenethiwekhi zentlalo ukuvumelanisa oonxibelelwano bakho be-Facebook okanye be-Twitter kwaye ubongeze kubafowunelwa bakho. Kusenokwenzeka ngandlela thile ukunikezelwa kweewijethi ezinikezelayo, ukungabinamzekelo wewotshi, iidesika ezinjenge-LG okanye i-HTCSense. Kodwa awuyi kuba nangxaki ekufumaneni i-823498235 (inani eliqikelelweyo) leewijethi ezinewotshi kwintengiso ye-Android.
Ibandakanya izicelo zakho yenkqubo ye Imeyile okanye iKhalenda, Ukongeza kwi-Google gapps kunye ne-app ehambelana ne-Gmail, Gtalk ... Sikwanesicelo esingaphezulu komdla lawula imisebenzi kwaye ukwazi ukuvala isicelo eshiye ngasemva ngaphandle kokwazi okanye esivaliwe nje. Isiqulathi seefolda ukubona iifayile zethu kwimemori yangaphakathi okanye kwi-microSD. Ikwanayo ne iofisi yasimahla kunye idayari encinci ukubhala phantsi izinto zethu. Izisa Ividiyo yeQik ukufowuna ividiyo (kunye nencwadana yayo yeQik) ukuze usebenzise ikhamera yangaphambili.
El Isidlali media iphantsi. Nangona kunjalo, kusengqiqweni ukuba sisixhobo sokudlala umxholo wemultimedia, esi siginali sinomgangatho ophezulu weaudiyo. Umdlali uqobo ukongeza isilinganisi, inikeza ezinye Iziphumo zesandi ngaphezu komdla wokuphucula umculo wakho owuthandayo kwaye ube nakho ukuhlengahlengisa zonke iinketho njengoko uthanda kakhulu kwaye ke ungonwabela iingoma zakho ozithandayo nanini na ufuna nomgangatho oza kuwuthanda.
Olunye ukhetho olunomdla kukuba 'Allshare ' ukusuka kwi-Samsung. Kulabo abangaziyo, sisicelo sezixhobo ze-Samsung eziya kuthi zisivumele yabelana ngeefayile zemithombo yeendaba esinazo kwizixhobo zebrendi, ukudibanisa kunye okanye kunye ne-PC ngokusebenzisa inethiwekhi yakho yasekhaya ye-Wi-Fi, ngaphandle kweentambo. Okwangoku ndimamele umculo ogcinwe kwiGPS S Wifi yam ngokusebenzisa iPC ngaphandle kokudlulisela umculo kwi-hard drive yayo, kwaye ngaphandle kokuqhagamshela naziphi na iintambo. Ungawulawula umculo kwifowuni uqobo, ukhetha ukuba utshintshele nini kwingoma, kunye nento ofuna ukuyidlala. Iya kuba yinto efanayo nokwabelana ngeefolda zenethiwekhi phakathi kwezixhobo, kodwa ngaphandle kokumisela useto.
Ukuba kuko konke oku, sidibanisa ukuba sinaso phambi kwe Isixhobo se-Android, Singangena kwiNtengiso kwaye sikhuphele zonke usetyenziso esizisebenzisa kwifowuni yethu. Sijongene ne Isiphelo sendlela njengayo nayiphi na enye Android, ngezibonelelo ezibonelelweyo, kunye ngaphandle kokuhlawula umqhubi wefowuni rhoqo ngenyanga. Mhlawumbi ukuba uphoswa yindawo ye-microSIM kwaye ukwazi ukuba ne-3G ngaphandle kwekhaya, kuba asisoloko sinayo iWi-Fi. Ewe kunjalo, oku kuyonyusa iindleko zesiphelo kwaye akusayi kuphinda kube nomtsalane emehlweni abathengi.
Okokugqibela, thetha malunga 2500mAh ibhetri. Iyahambelana, kwaye kakhulu. Ukuthatha ingqalelo yokuba sinesikrini esine-intshi ezintlanu, ungabona yonke into oyifunayo kwaye umamele umculo omninzi. Ifika kwi-6h yevidiyo ethi i-Samsung ibhengeze ngaphezu kokwaneleyo. Ukuba nawe udlala imidlalo, kuya kufuneka ube nexesha elimnandi lokudlala ibhetri.
Ukuza kuthi ga ngoku eli candelo lesibini esithetha ngalo ngesoftware. Kuya kubakho ifayile ye- isahlulo sesithathu Apho siza kujonga khona ukusebenza kwesiphelo kwaye siya kuvavanya umdlalo ofuna amandla emifanekiso, ukubona ukuba ngaba i-terminal ingasinika amandla na okanye hayi, ngokubala 'kuphela' kunye neprosesa ye-1GHz kunye nomongo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Reviews » Uvavanyo lwe-Samsung Galaxy S Wifi 5.0 (II)
ndiyamthanda uSamsung sitsho
Nceda uthathe isahlulo sesithathu, ndiyayithanda, intle kwaye inezinto ezintle kakhulu, kodwa ndiyathandabuza ukuthenga le okanye ipod touch DILEMA,
Phendula ndiqubude kwi-Samsung
Ndinayo phantse ilungile. Ndineevidiyo ezimbalwa zokufaka.
Ngale njikalanga nakanjani !!
Sele ndiyipapashile ngomhla wayo.
Ndiyabona ukuba khange umamele 😛
Ewe, thenga i-Galaxy ukuba i-Ipod touch yinto engahambelani nayo yonke into. Ndinesizukulwane sesine se-iPod endinokuyivuyela ukutshintshela kumthala.
Uxolo lokungazi kwam, le modeli yesamsung ye-galaxy s yp-g70 ngumdlali wethebhulethi kuphela okanye inokusetyenziswa njengeselula ?????
Imvelaphi ye87 sitsho
molo ndine-galaxi S yp-G70 SN ndifuna ukwazi ukukhuphela imifanekiso kwi-pc
UFabian Del Pino umfanekiso wokubamba sitsho
Uxolo ndiyithengile i-wifi 5.0 ye-S okanye i-wifi 3.1, Umbuzo wam ngowokuba ingaba kunokwenzeka na ukuba uhlaziye esi sixhobo kwi-Android 4.0 HONEYCOMB okanye kwi-XNUMX ICECREAM SANDWICH?
Enkosi kwaye ndiyathemba ukuba ungandinceda!
Phendula uFabian Del Pino
Akukho zinguqulelo zaseburhulumenteni zingaphezulu kwe-2.3. Ngelishwa i-Samsung isishiyile okoko izixhobo zinika ngokwaneleyo ukuba zisebenzise i-4.0 kakuhle. (Ukuba uhlobo lwe-xperia luyayiqhuba, sukuqhuba lo mdlali wemidiya!)
Ndiyivula njani ipini kwithebhulethi yp g70
Iyiphi ingcaciso? sitsho
Ngaba le galaxy s ingaba yiselfowuni?
Molo, ndinetafile ye-Samsung Galaxy YP G70, kwaye bendifuna ukwazi ukuba ikhona indlela yokuyisebenzisa njengefowuni. kwaye ukuba kunjalo, yenziwa njani?
Ndingazithatha njani izikrini
Molweni ndinayo i-galaxy s yp-g70 bendifuna ukwazi ukuba ingaba ikhona na indlela yokuyisebenzisa njengeselfowuni?
omnye umbuzo: ngaba unokukhuphela i-whatssapp kule thebhulethi? ndingayikhuphela phi? Intoni? nceda nceda 🙂
UAlonso Ibañez Becerra sitsho
Namhlanje ukuba ndithe ndavula i-samsung galaxy s wifi 5.0 ayinayo into ejikeleze yona eyaphukayo okanye ndiyivula njani
Phendula uAlonso Ibañez Becerra
Ndingayithenga njani le galaxy yp g70 ndingayithanda njani le mveliso ndihlala eArgentina enkosi igama lam ndinguWilly